(Last Nohavaozina: 22/05/2021)
Eoropa, ny tsara tarehy tany famirapiratana sy ny angano dia isalasalana fa ny handeha-ny toerana ho an'ny Travel rehetra mafana fo avy any. Amin'ny toerana tsy manam-petra fifohazana tahotra ny fitsidihana, Eoropa no fantatra ho iray amin'ireo tsara tarehy any ivelany hubs fianarana ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena toy ny manana iombonana fanomen'i ny torapasika, nosy, lapa, trano fiarovana, ary tsangambato ara-tantara.
Salzburg no misy eo amin'ny sisin-tanin'i Alemaina, any amin'ny firenena Austria, ary dia cuddled ny lehibe Atsinanana Alpes izay tena ny fahitana ny maso. izany mahagaga sy Lesser fantatra Beautiful Destinations tanàna ny toerana nahaterahan'i ny Mozart, ny mpamoron-kira malaza mozika, izay
Inona no ho lany indray mandeha tanàna, Constanta no fahatelo lehibe indrindra eto Romania tanàna sy toeran-kafa tsara tarehy kely fantatra any Eropa, ary seranan-tsambo mikarantsana miorina eo amoron'ny andrefan'ny Ranomasina Mainty.
Constanta no an-trano ho maro verifiable mpizaha tany toerana mafampana miverina any amin'ny fahafolo taonjato, anisan'izany ny Ovid Square, izay iray Sarivongana varahina mampiseho an'i romanina mpanakanto Ovid mijoro, ary ny niala tsy Constanta Casino, izay manasongadina ny rafitry ny Art Noveau. Constanta koa angamba no mahafinaritra indrindra seashores, izay dia hahazo fahafahana ho sunbathe sy hamaha ny. Raha ao amin'ny sahisahy toe-po, misy dia mandritra ny andro maromaro from Constanta, anisan'izany ny fitsidihana roa UNESCO Lova Sites izany hoe Danube sy Tulcea sasatra miaraka amin'ny farany mankany amin'ny malaza Beach Resort, Mangalia.
Miafina ambanin'ny aloky ny rehetra ny malaza kokoa Belza vondrom-piarahamonina an-drenivohitra toy ny Antwerp sy Brussels, Ghent dia miafina vatosoa any Belzika. Amin'ny mahaliana tanàna sy kely lavitra fikorontanana, Ghent dia ampy mba hahatonga anao kely aina sy goavana ampy zava-manitra ambony ny traikefa. Raha toa ianao ka tia ny tsara tarehy tranombakoka, mihidy-damaody, sy ny lafiny Canal hevitra, dia tena tsy te-hanampy Ghent ny Travel lala andehana. Ny ampahany amin 'ny toerana izay tsy tokony ho tsinontsinoavina dia ahitana Gravensteen, ny fahafolo tamin'ny taonjato trano izy amin'ny lakandrano sy mahavariana hevitra, ny Belfry of Ghent, ary ny St baro Cathedral.
Diniho Helsinki fitsidihana mandritra ny mandrakizay andro fahavaratra mba hampitombo ny fotoana any na tafio ny gutsy kiraro ary miadia ny rakotra ririnina hariva. Na izany na tsy izany, misy toy izany ny zavatra hita isa be ny mahita, dia tsy manana ny safidy tanteraka ambarao ny tsiambaratelo rehetra mitazona izany!
Ny misaraka any Kroasia no tanjona tsara tarehy tsy dia fantatra loatra noho ny fialantsasatra raha eo am-pitadiavana fitrangan-javatra ianao tanàna amoron-tsiraka fifangaroana amin'ny vatany Mediterane vibes. Ny dalmasianina nahandro eto miaraka amin'ny vaovao hazan-dranomasina no hanafosafo ianareo hisaina tsara ka mankanesa eo amin'ny lohalika!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flesser-known-beautiful-destinations%2F%0A%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Polonina, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe